NCHỌGHARỊ NCHỌGHARỊ 7.5.3 FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
Ihe nchọgharị nyocha 7.5.3
N'ihi plugins dị iche, enwere ike ịgbasa ihe nchọgharị Ịntanetị. Mana ọ na-emekarị na usoro ihe omume a gbochie ọrụ ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ apụta. N'okwu a, njehie na-egosi na ihe nchọgharị ahụ enweghị ike ibudata. Tụlee nsogbu a na Yandex Browser.
Ihe ntinyeghi na Yandex Browser
E nwere naanị nkwụnye plug ise arụnyere na ihe nchọgharị Ịntanetị a, ọ dị mwute na ịnweghị ike ịwụnye ya ọzọ, ọ bụ naanị ntinye nke tinye-ons dị gị. Ya mere, anyị ga-emeso naanị nsogbu nke modul ndị a. Ebe ọ bụ na ọtụtụ oge enwere nsogbu na Adobe Flash Player, mgbe ahụ, anyị ga-enyocha ngwọta na-eji ihe atụ nke ya. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ndị ọzọ plugins, ndị manipulations akọwa n'okpuru ga-enyere gị aka.
Usoro 1: Kwado modul
O kwere omume na Flash Player anaghị arụ ọrụ naanị n'ihi na agbanyụrịrị ya. Ọ dị mkpa ka ịlele ozugbo ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, rụọ ọrụ ya. Tụlee otú e si eme nke a:
Na nbanye adreesị, tinye:
Nchọgharị: // Ntinye
wee pịa "Tinye".
N'ime ndepụta, chọta usoro chọrọ, ma ọ bụrụ na agbanyụrụ, pịa "Kwado".
Ugbu a gaa na ibe ebe i zutere njehie ma chọpụta ọrụ nke ngwa mgbakwunye.
Usoro 2: Gbanyụọ modul ụdị PPAPI
Usoro a dabara naanị maka ndị nwere nsogbu na Adobe Flash Player. Ugbu a, a na-etinye PPAPI-flash na akpaghị aka, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ụzọ zuru ezu mepụtara, ya mere ọ ka mma iji gbanyụọ ya ma chọpụta maka mgbanwe. Ị nwere ike ime ya dị ka nke a:
Gaa na otu taabụ na plugins wee pịa "Nkọwa".
Chọta ngwa mgbakwunye ị chọrọ ma gbanyụọ ndị ụdị PPAPI.
Malitegharịa ihe nchọgharị gị ma lelee mgbanwe. Ọ bụrụ na ọ kaghị amalite, mgbe ahụ, ọ ka mma ịgbanwuo ihe niile.
Nzọụkwụ 3: Ihichapụ oghere na kuki faịlụ
O nwere ike ịbụ na a zọpụtala ibe gị na mbipụta ahụ mgbe ebido ya na nkwarụ ahụ nwere nkwarụ. Iji tọgharịa nke a, ị ga-ehichapụ data zoro ezo. Maka nke a:
Pịa na akara ngosi ahụ n'ụdị oghere atọ dị na nri aka nri nke nchọgharị ma gbasaa "Akụkọ ihe mere eme", wee gaa ndepụta ndozi site na ịpị "Akụkọ ihe mere eme".
Pịa "Kọwaa ihe mere eme".
Họrọ ihe "Faịlụ ndị echekwara" ma "Kuki na saịtị data na modulu"wee kwenye ikpochapụ data ahụ.
Gụkwuo: Otu esi ehichapụ Yandex Browser cache
Malitegharịa ihe nchọgharị ma gbalịa ịchọpụta na modul na-arụ ọrụ ọzọ.
Ọ bụrụ na usoro atọ a enyereghị aka, mgbe ahụ enwere otu nhọrọ - ụfọdụ ọdịda adabere na faịlụ nke ihe nchọgharị ahụ n'onwe ya. Ihe ngwọta kasị mma na nke a bụ iji dozie ya.
Mbụ ị ga-ewepụ kpamkpam Yandex a. Nchọgharị na kpochapụ kọmputa site na faịlụ ndị fọdụrụ ka ụdị ọhụrụ ahụ adịghị anabata ntọala nke ochie ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, budata nsụgharị kachasị ọhụrụ site na saịtị ọrụ ahụ ma wụnye ya na kọmputa gị, na isoro ntuziaka dị na installer ahụ.
Esi tinye Yandex Browser na kọmputa gị
Esi wepụ Yandex Nchọgharị na kọmputa gị
Ighagharia Yandex Nchọgharị mgbe ị na-ejigide ibe edokọbara
Ugbu a ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na modul ahụ enwetala oge a.
Ndị a bụ ụzọ bụ isi isi dozie nsogbu ahụ na mbido plug-ins na Yandex Browser. Ọ bụrụ na ị gbalịrị otu ma ọ gaghị enyere gị aka, ada mbà, gaa na nke na-esote, otu n'ime ha ga-edozi nsogbu gị.